Dooda: Qaniisadu (reer galbeedka) dhamaantood waa dabiiciyo gumeysi iyo keli-talisnimo - marka loo eego fikirka ah dadka cadaanka ah, "Madowga / Afrikaanka malahan naf, waxay yihiin sida xayawaanka, waan baabi'in karnaa, wax dhib ah malahan", a dhawaaqay kaniisadda Ilaaha reer binu Israa'iil ... (VIDEO)
Posted By: KongoLisolowaa: May 2, 2020 00: 20 No Comments
Sababta oo ah qaabkan wax lagu arkaa ayaa ku xididaysan dhammaantood. Goorma ayay dadka madow / afrikaanka ahi ugu dambeyntii fahmi doonaan? Taasi Whites (Reer Galbeedka) ma ahan saaxiibbadeen, ma jecel yihiin annaga ??
Qarniyadeena afrikaanka ah, waxaan door bidnay inaan adoonsigeeno ahaano, jujuunno iyo dhammaan noocyada ficillada macabre ee kaliya ee nalooga dilo anfacaya isla deganayaashan. Sidaas awgeed waa qaladkeenna. Aynu lasocono sababta oo ah saboolnimada madow / Afrikaanka ayaa ka sarreysa dhammaan ruuxiga, dhaqanka iyo akhlaaqda.
Sep29 06: 32